Onye isi akwukwo ohuru UNWTO, olee otu o si bia ebe ahu?
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Akụkọ njem Georgia » Onye isi akwukwo ohuru UNWTO, olee otu o si bia ebe ahu?
Ọ bụ ezigbo nwoke, ọ bụ nnukwu mmụba maka UNWTO, mana etu o si rute ebe ahụ nwere ike ịbụ akụkụ nke egwuregwu ahụ. Dabere na ozi enwetara site na eTN Sources, Secretary General UNWTO Zurab Pololikashvili ka họpụtara onye nnochite anya Colombia Jaime Alberto Cabal ka ọ bụrụ osote ya.
UNWTO akwadoghi nke a.
eTN natara ozi oge ụfọdụ gara aga wee kpọọ onye nnọchi anya ya Cabal na Machị iji kwado ma ọ bụ gọnahụ asịrị ahụ. Onye nnọchi anya gọọmentị ahụ gwara eTN na ya enweghị atụmatụ dị otú a iji rụọ ọrụ maka UNWTO ma soro SG Zurab gwa naanị otu oge mgbe ntuli aka gasịrị. Ọ gwara eTN, ọ nweghị ihe mere ọ ga-eji hapụ ọkwa ya dị ka onye nnọchi anya Colombia na Austria ma kwaga Madrid iji nweta ọkwa na UNWTO.
Otu eTN Source ahụ kwuru na nhọpụta a tụrụ anya bụ akụkụ nke nkwekọrịta nke ejiri nwayọ mee tupu ntuli aka Secretary General UNWTO n'oge na-adịbeghị anya. Isi mmalite ahụ gwara eTN n'oge ahụ naanị ihe mere onye nnọchi anya Cabal ji na-agba ọsọ maka ọkwa nke UNWTO Secretary General ga-ewepụ ntuli aka n'aka ndị ọzọ na-aga ime yana mechaa nwee ntuli aka ndị a na Zurab na-agba ọsọ na Georgia.
Mbugharị a nwere ike ọ bụrụ na enyere Zurab ihe ka mkpa, yabụ o mechara nwee ike ijide ọtụtụ na ntuli aka nke abụọ. Na nloghachi Zurab kwere nkwa onye nnọchi anya onye nnọchi anya gọọmentị Cabal. eTN anụla nke a kemgbe ndị Kọmitii Executive mere ihe karịrị otu afọ gara aga na Madrid. Cabal gọnarịrị nke a mgbe ọ gwara eTN na Machị.
Ihe na-akpali mmasị bụkwa eziokwu ahụ bụ na ndị ọzọ niile ahọpụtara n'ọchịchị UNWTO hapụrụ ma ọ bụ gwa ha ka ha pụọ ​​na nzukọ ahụ, onye nnọchi anya gọọmentị Cabal nọ ugbu a.
Ka o sina dị, a ga-ahụ nhọpụta Cabal dị ka ezigbo mmegharị mgbe niile. Cabal ruru eru nke ukwuu ma nzukọ a chọrọ onye osote onye siri ike iji laghachi n'ụzọ. "Eziokwu ahụ bụ na Maazị Cabal nwere ike ịnweta mgbasa ozi naanị ya bụ ikuku nnabata na ikuku ọhụụ na-abịa site na Madrid," ka Juergen Steinmetz, onye mbipụta eTN kwuru.
Ọnye na-bụ Jaime Alberto Cabal?
Onye osote onye isi UNWTO ohuru General Jaime Alberto Cabal, onye bụbu Minista nke Colombia na onye nnọchi anya Colombia na Austria, Croatia, Slovakia, Slovenia, Hungary, Montenegro, Czech Republic na Serbia nwere ọkwá dị iche iche na ngalaba ụlọ ọrụ na nke azụmahịa. O werela ibu ọrụ gọọmentị yana ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na agụmakwụkwọ nke na-egosipụta onwe ya site na ndu ya na njikwa ya, na-eleba anya na okike na mgbanwe nke otu nwere nnukwu mmetụta na mmepe mmekọrịta akụ na ụba obodo, yana site na ọchụnta ego ya, ịmepụta ọrụ , ọrụ na ohere agụmakwụkwọ.
Ọkachamara ya na nka ọrụ ya metụtara nhazi na mmejuputa atumatu ọha na eze maka mmepe nke ngalaba dị iche iche na mmekọrịta akụ na ụba na mmepe obodo, ọkachasị na ngalaba ụlọ ọrụ mmepụta ihe na njem, ma jikọtara ya na okike, set- elu, nhazigharị na atụmatụ nke otu, mkpakọrịta azụmahịa na ụlọ ọrụ yana imewe na mwepụta nke mmemme, ọrụ na omume nke metụtara ngalaba na mpaghara dị iche iche.
N'ime oge ọrụ ya niile, ọ rụkwara ọrụ dị ka onye ntụzi aka nke otu na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya maka mmepe nke ndị NGO na Colombia, dị ka onye isi ala nke ndị Colombia na-azụ ahịa obere na ụlọ ọrụ ndị ahịa - ACOPI, dị ka onye isi oche nke ụlọ ọrụ Danaranjo SA, yana onye ndụmọdụ ọkachamara nke onye bụbu European Community Economic na ubi nke ọrụ mmekọrịta mmadụ na mmepe azụmaahịa ya na obibi na Spain yana, na-esote, na Switzerland na England.
2. Omumu ihe na oru
Onye Injinia ulo oru ulo akwukwo nke Mahadum Javeriana di na Bogota nwere mmuta na asusu bekee na aku na uba Georgetown University na Master's Degree in Economy na Mahadum Amerika na Washington DC O nwekwara nzere nzere Postgraduate na Senior Management na Mahadum Los Andes na Inalde Business School na Bogota DC N'otu aka ahụ, ọ bụ ọkachamara na Entlọ ahịa na Nchịkwa maka Smalllọ Ọrụ Obere na Ọkara na Nchịkwa nke Companlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọha na Mahadum nke South Carolina, Ilọ Azụmaahịa IE na Madrid na Complutense University dị na Spain.
Na mgbakwunye na Spanish, site na ọzụzụ ya na ahụmịhe ọkachamara ya, ọ maara Bekee nke ọma dịka asụsụ azụmahịa.
O mere ihe di nkpa na oru oru ya banyere nkwado nke ndi otu ndi otu, ndi oru ahia na ndi obere ulo oru site na ịmalite mmemme dika microcredit, okike ulo oru ohuru na iwebata atumatu ọha na eze na ntinye ha n’uwa dum.
Dị ka Minista maka mmepe mmepe, ọ kwalitere ma nyefee iwu ndị dị mkpa maka iwusi ike nke ngalaba na ụlọ ọrụ na-adịghị ike, na-atụ aka Iwu 590 maka Nkwado nke Micro, Small and Medium-Sized Enterprises, Iwu 550 maka Nzọpụta na Nhazigharị Companlọ Ọrụ, na Iwu 546 maka Social Housing. Ọ kwalitekwara ịmepụta ego na mmemme microcredit yana nkwado mba ụwa na ụlọ ọrụ dị mkpa nke mba dị iche iche na United Nations, dịka UNIDO na UNPD n'etiti ndị ọzọ.
Na ngalaba nke diplọma, dị ka onye nnochite anya na South Korea, o nyere aka na mkparịta ụka nke Free Trade Agreement n'etiti mba abụọ ahụ, na mmụba nke imekọ ihe ọnụ na ọrụ azụmahịa na ngalaba nke Colombia na-ebupụ na ntinye ego nke ụlọ ọrụ Korea, na ewusi ụlọ ọrụ nke Embasii. Na Austria na mba ndị a na-emekọ ihe ọnụ, ọ gosipụtago onwe ya site na ịmalite imeghe na imeghe nke ndị Embassies na Colombia, site na ịkwalite ọrụ nkwado dị mkpa ọkachasị na ngalaba azụmahịa nke Colombia yana site na ịtọlite ​​itinye ego na Colombia site na ụlọ ọrụ nke mba ndị a.
Dịka onye nnọchi anya na-adịgide adịgide nke Colombia na United Nations Organisation na ndị ọzọ na International Organisations dabere na Vienna, ọ na-anọchi anya ọdịmma obodo na United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC, the International Atomic Energy Agency - IAEA, na United Nations Development Development Office - UNIDO, n'etiti ndị ọzọ.
3.1 Na mpaghara ndi njem
Ihe ndị ọ rụpụtara na nsonaazụ ya na mpaghara ndị njem ahụ kwesịrị ịrịba ama. N'okpuru nduzi ya dị ka Onye isi oche nke Colombian Hotel and Tourism Association, o nyere aka na ọgbọ nke atụmatụ ọhụrụ maka mmepe na ike nke ngalaba a site na Iwu 1101 na njem, site na ịkwalite Iwu 788 na Taxtụ Isi maka Constructionlọ na Ndozigharị Elslọ oriri na ọ Hotụ byụ, na site na imezigharị Fundlọ Ọrụ Na-eme njem nlegharị Anya na Colombia - FONTUR. Ọ tụkwara aro iji jikọta PROEXPORT, nke a maara taa dịka PROCOLOMBIA, na nkwalite njegharị nke mba ụwa.
Ebumnuche nke mmemme imekọ ihe ọnụ dị mkpa yana ihe karịrị mba 15 na-eduzi mmemme ọzụzụ mba ụwa maka ihe karịrị ndị 950 Colombia na-azụ ahịa ka ndị isi nke mpaghara njem ahụ mara nke ọma. O burula mbu uzo oru ndi elebara anya na ndi njem, mmepe na-adigide, ulo oru oma, na oru ndi mmadu.
Ọ nọchitere anya mpaghara ndị njem na ngalaba ndị isi nke PROCOLOMBIA, FONTUR na Country Brand “Colombia es Pasión”. Ọ rụrụ ọrụ dị ka Onye isi nke Chamber of Tourism of Colombia na Ibero-American Hotel Association.
Banyere Tourtù Na-ahụ Maka Njem Nlegharị Anya Ministerwa: N'ọrụ ya dị ka Minista, o nyere aka na ntinye nke Colombia na Organizationtù ahụ, na dịka onye ndu azụmaahịa, o nyere aka n'ịkwalite Colombia dị ka ebe a na-anabata nzukọ UNWTO World Assembly nke 17th, nke e mere na Cartagena na 2007, na otutu afọ, o jidere onye isi oche nke ndị otu jikọrọ nzukọ a. Ọ haziri ma sonye dị ka onye nkuzi na nzukọ ọmụmụ na mkpa nke nzukọ.
3.2 Ihe ndi ozo na ihe ndi ozo
Mba dị iche iche akpọwo ya dị ka onye ndụmọdụ na onye nkuzi na onye so na kọmitii nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ Colombia, na-akọwapụta ahịa ahịa Colombia, Caja Social Bank na, na ọkwa mba ụwa, Executive Board of the CAF- Development Bank of Latin Amerịka. Ruo ọtụtụ afọ, ọ bụ onye otu Kọmịshọn Mba Na-ahụ Maka Mkparịta Udo nke Udo. Maka ihe ọ rụzuru na nsonaazụ ya, ọ natara ọtụtụ nzere na onyinye site n'aka ndị gọọmentị mpaghara na mpaghara nke Colombia, gọọmentị mba Colombia na onwe ya, na ndị otu mba ụwa.
Courtlọ ikpe nyere Uber iwu ka ọ kwụsị ọrụ na Vienna
Golden Tulip na-egosi MoU na Ice Land Water Park n'okpuru nkwado nke RAKTDA
Agbapụ gbara na YVR. Egburu na Vancouver International Airport dị na BC, Canada